Isikhokelo sinyathelo ngesinyathelo sokuthenga i-LGD-4033 powder online: AASraw
Isikhokelo sesinyathelo kunye nesinyathelo sokuthenga i-LGD-4033 powder online
/Blog/LGD-4033/Isikhokelo sesinyathelo kunye nesinyathelo sokuthenga i-LGD-4033 powder online
ezaposwa ngomhla 04 / 24 / 2018 by UDkt Patrick Young bha liweyo LGD-4033.
Yonke into nge-LGD-4033 powder
1.Buy i-LGD-4033 Powder Online
2.Yintoni i-LGD-4033 Powder, i-CAS No.1165910-22-4?
3. Umsebenzi we-LGD-4033 usebenze njani nge-LGD-4033 Inkqubo yendlela yokusebenza
4.LGD-4033 uPowder Research
5.LGD-4033 Powder Half Life
I-6.LGD-4033 Inzuzo yePowder 丨 Yintoni i-LGD-4033 Powder inokukunceda
I-7.I-LGD-4033 Ubuninzi bePowder?
8.LGD-4033 Powder ngaphambi nangemva koko
9.Usebenzisa njani i-LGD-4033 Powder LGD-4033 Ukunyuka kwePowder powder
10.LGD-4033 Iimpembelelo zecala lePowder
11. Iingcebiso zePDD ze-LGD-4033
12.Nokuthenga i-LGD-4033 Powder
(I-VK5211 powder) i-LGD-4033 powder, ividiyo yeLigandrol powdere
I. (i-VK5211 powder) i-LGD-4033 powder, iLigandrol powdere Abalinganiswa basisiseko:
igama: I-LGD-4033 powder
I-molecular Formula: C14H12F6N2O
Isisindo somzimba: 338.24
umbala: Mhlophe iPowstal Powder
1. Thenga i-LGD-4033 Powder Online
Ukuba ucinga ngako bathenge i-LGD-4033 Powder kwi-intanethi, okanye ukuba awuqinisekanga ukuba i-LGD-4033 Powder iyayifaneleka kwiimfuno zakho okanye hayi, kuya kufuneka ukuba ucinge ngendlela i-LGD-4033 Powder ikunika ngayo, kwaye yiyiphi imiphumo ye-LGD-4033 ebusayo Imiphumo yePowder ukukhangela. Yingakho sihlanganyela esi sikhokelo kuwe, ngoko unokufunda yonke into oyifunayo ukuze ufunde i-LGD-4033 Powder eluhlaza, kunye nokufumanisa ukuba i-LGD-4033 Powder iya kulungelelaniswa nolawulo lwakho loqeqesho.
2. Yintoni i-LGD-4033 Powder, i-CAS No.1165910-22-4?
I-LGD-4033 Powder, eyaziwa nangokuthi i-Ligandrol, i-VK5211, i-SARM eye iboniswe ukuba ineempembelelo ezilungileyo kwisakhiwo se-muscle, ukulungiswa komzimba, ukuqhutyelwa komzimba, kunye nokuxinwa kwethambo. Sekunzima kwizilingo zomntu, iLigandrol iboniswe ukuba ikhethe kakhulu iiseli zesisundu kunye neethambo, ngokuyininzi iyayihoxisa i-prostate okanye iiseli ezizimeleyo. Oku kwenza iziphumo ezibi kwi-LGD-4033 Ubuncwane obuncinane obuncinane.
AASraw inkampani inika abaphandi emhlabeni jikelele ngeyona mveliso esemgangathweni ye-LGD-4033 ukuthengiswa kwi-intanethi (i-ligandrol powder / i-VK5211 powder i-SARMs powder). Uphando lubonisile ukuba i-Ligandrol powder / VK5211 powder, i-LGD-4033 Powder eluhlaza, enye ye-SARM eqineleyo powder ngokubhekisele kumandla kunye nobukhulu ngoba ibophelela ngokukhethayo kwi-androgen receptors eyenza umsebenzi we-anabolic kuphela ngamathambo kunye nezihlunu ngoko ukuthelekiswa kwayo i-steroids ngaphandle kwe-LGD-4033 Impembelelo yempembelelo. I-GG-4033 Powder ibonise enye inzuzo kwaye i-testosterone kubantu abanomdlavuza kunye nezifo ezonakalisa izifo ngenxa yokuba zibonakaliswe ukuba zinegalelo elincinci leLigandrol.LGD-4033 Ubuninzi be-LGD- I-4033 iinzuzo eziMveliso eziMdaka ngaphandle kwomeleleyo kunye nokunyuka kwemisipha ekhulayo, iqhuma inkqubo yokuphulukisa imisipha, kwaye iphinde iqinisekiswe ukunciphisa amanqamlezo omzimba.I-PGD-4033 i-Powder inefuthe elilodwa linye icala elincinci lokunciphisa i-testosterone elibonise kuphela malunga neyinye iveki ezimbini emva kokusebenzisa i-DG-4033 Iifayili zamanqwanqwa ziyahluka ukusuka kwincinci ye-LGD-4033 encinci ye-Powder dosage emele isetyenziswe njenge-arhente yokusika ukuya kumayeza aphezulu isetyenziswe njenge-agent agent.
Inkampani yeAASraw inikezela ngomgangatho ophezulu I-LGD-4033 Powder ukuthengiswa ngcaciso e
Igama: I-LGD-4033 Powder, VK5211, iLigandrol
I-LGD-4033 Ubunzima be-Molecular Formula: C14H12F6N2O
I-LGD-4033 Ubuninzi obuninzi Ubunzima beMelecular: 338.24
I-LGD-4033 i-Powder Melt Point: 105 - 106 ° C
I-LGD-4033 Inkqubo yokuSondeza iPowder Powder: RT
Umbala wePowder ye-LGD-4033 eluhlaza: Phuma i-white Crystal Powder
Umenzi wePower Maker LGD-4033: www.aasraw.com
Iphakheji ye-LGD-4033 Powder: isikhwama se-foil okanye ukwenza ngokwezifiso, umfanekiso wepakethe okhoyo emva kokuthunyelwa
Ixesha lokuthumela: Iimpahla zingathunyelwa ngaphandle kweeyure ze-12 emva kokuhlawula
Indlela yokuhlawula: i-WesternUnion, i-MoneyGram, i-Bitocin, ukudluliselwa kweBhanki
Kwiimeko ezininzi, abantu bahlala benomdla wokufumana ukuba isongezelelo sisebenza okanye cha. Ubungakanani obuninzi be-LGD-4033 bubuncwane obuphephile kunye nephephestone ekhuselekileyo obusebenza ngokuqinisekileyo. Isebenza ngokuzibophelela kwi-androgen receptors. I-LGD-4033 Powder kuphela izibophelelo kwi-receptionors ezikhethiweyo ze-androgen ngaphakathi kwezihlunu. Oku kuchasene nezinye i-androgen receptors ezitholakala emathanjeni, kwi-fat and brain. Oku, oko kuthetha ukuba oku kuza kubonelela ngokukhawuleza neziphumo ezikhawulezayo.
Lo umehluko omkhulu phakathi kwe-anabolic steroids (aasraw) kunye SARMS.
I-Anabolic steroids yokwandisa umsebenzi we-androgen kwimizimba emininzi.
Ii-SAR zandisa umsebenzi we-androgen kuphela kwizicubu ezithile.
Enye yezinto eziphambili ezixhalabele kakhulu kwi-steroids kukuba ziyakwandisa ubukhulu beprostate yakho enokubangela ukuba ube ne-benign prostatic hyperplasia (BPH).
I-BPH ayiyona imeko ebalulekileyo kakhulu, kodwa inokuba nefuthe elibi kwimpilo yakho.
Yingakho i-LGD-4033 Powder yindlela ekhangayo kwi-steroids.
4. Uphando lwe-LGD-4033 uPowder
Kukho uphando oluninzi malunga nokusebenza kweSARM (uphando lwe-SARMS) kodwa uphando oluncinane lupapashwe namhlanje Uphando lwe-LGD-4033 Powder.
I-LGD-4033 Powder eluhlaza iye yabonisa into enqwenelekayo kwi-vivo ngempumelelo kwimilinganiselo ye-squelet and muscle kwizilwanyana zezilwanyana. Kukho olunye uphando olushicilelwe kwimiphumo ye-LGD-4033 Powder CAS: 1165910-22-4kubantu kunye neSiphumo seSigaba seNtsholongwane.
Amadoda angama-76 (aneminyaka eyi-21-50) athola enye yonyango olulandelayo:
-0.3mg I-LGD-4033 Ubuninzi obunobumba
Emva kweentsuku ze-21, amanyathelo athatyathwa ukuxinwa kwemisipha, ubuninzi beoli, amandla, ama-hormone, kunye neminye imilinganiselo yezempilo jikelele.
Izifundo ezifumana i-LGD-4033 Powder exhomekeke kwi-dose-engaphezulu (ngaphezulu okungcono) iya kwandisa ubunzima besisipha.
I-LGD-4033 Powder eluhlaza yayinyamezeleke. Akukho ziganeko ezinzulu ezinxulumene neziyobisi. Ukuphindaphinda kweziganeko ezimbi kwakufana phakathi kwamaqela asebenzayo kunye nama-placebo. I-Hemoglobin, i-prostate-specific antigen, i-aspartate aminotransferase, i-alanine aminotransferase, okanye ii-QT ezikhethiweyo azizange zitshintshe kakhulu nakwiyiphi i dose.
I-LGD-4033 Powder yayinexesha elide lokuphelisa i-half-life and dose-proportional accumulation on multiple dosing.
Ulawulo lwe-LGD-4033 olukhusileyo lwe-Powder ulawulo lwalunxulumene nokuxothwa ngokuxhomekeke kwenzalo ye testosterone, i-globulin ye-hormone-sex-hormone-binding, i-cholestolol, ne-triglyceride. I-hormone evuselela i-follicone kunye ne-testosterone yamahhala yabonisa ukuxinwa okukhulu kwi-1.0-mg dose kuphela. Ubunzima bomzimba obunamafutha bunyuse umthamo ngokuxhomekeka, kodwa ubunzima bomzimba abuzange buguqulwe kakhulu. Amazinga eHormone kunye neep lipids babuyela kwisiseko emva kokuyeka ukunyanga.
I-LGD-4033 Powder ikhuselekile, ifumaneke kakuhle kwiprofmacokinetic profile, kunye nokunyuka komzimba okweyomzimba nangona ngethuba elifutshane ngaphandle kokutshintshwa kwi-antigen ethile-antigen. Izilingo ezinokude zenzelwe ukuba zihlolisise ukusebenza kwazo ekuphuculeni ukusebenza komzimba kunye neziphumo zempilo kubantu abakhethiweyo.
5. I-LGD-4033 Powder Half Life
I-LGD-4033 yobomi obuninzi obunobomi Ubunzima bemizuzu (24-36 iiyure), kwaye buhlala ixesha elide xa kuthelekiswa namanye ama-SARM (uphando lweSarms) kwimarike. Kunamandla kakhulu, ngoko kunconywa I-LGD-4033 Powder dosages ziphantsi.
6. I-LGD-4033 Iifowuni Zomfowunini Ù Yintoni i-LGD-4033 Powder inokukunceda
I-LGD-4033 Powder iyona myalezo enamandla kunye ne-androgen enenzuzo eya kunika umzimba wakho uluhlu lweentlobo ezininzi. Yintoni i-LGD-4033 Powder eluhlaza inokukunceda? I-LGD-4033 Powder benefits ingaquka:
Izinzuzo zezoNyango ze-LGD-4033:
I-osteoporosis yimeko apho amathambo omzimba abe buthathaka kakhulu ngenxa yokulahlekelwa kwemizimba. Xa ufumana imeko enjalo, ngokuqinisekileyo uya kuhlala ubuthathaka kwaye ungasebenzi. Ukuze ufumane isisombululo esisigxina malunga naleso simo, lo mrhumo ophezulu weyona mfuneko. Oku kungenxa yokuba i-androgen inefuthe elihle kwi-BMD.
Ukuthintela ukulahleka kwethambo nokwandisa amathambo kwindlela ezimbini zokukhusela i-osteoporosis. Ukongeza kwi-calcium kunye ne-vitamin D yokuxhaswa, i-bisphosphonates iyisithunywa esitholakalayo kubini nababhinqa.
I-Hormone yonyango yokuguqula indawo (HRT) isetyenziswa kakhulu ekuphatheni iimpawu zamadoda, kodwa ayisaphakanyiswa unyango lwangexesha elide, ngenxa yokwanda komngcipheko wesibeleko sebele kunye ne-endometrial, isifo se-gallbladder kunye ne-thromboembolism.
I-Androgens yaziwa ngokuba nefuthe elihle kwi-BMD ngokunyuka kwixesha elenziwe ngamathambo. Ukubaluleka kwabo ekugcineni ubukhulu beethambo kuboniswa ngokugqithisileyo kwe-osteopenia kwindoda engqongqo ye-AR yokukhankanya kunye nobungqina bokuba amadoda aphantsi kwe-androgen unyango lokunyanga (ADT) ixesha elide liphantsi kwehla kwi-BMD.
Ukusetyenziswa kwe-SARM ye-osteoporosis kuya kunika inzuzo kubo bobabini nabasetyhini, njengoko bengenayo imiphumo emibi ye-virilization ebonwe nge-steroidal androgens. Ucwaningo lweentsuku ze-120 olulinganisa i-SARM S-4 kunye ne-dihydrotestosterone (DHT) unyango kuma-ovariectomized rats lubonise ukuba i-S-4 yakwazi ukugcina amandla esithambo kunye namandla okwenza amathambo kumanqanaba olawulo oluchanekileyo kwaye kuboniswe ngempumelelo ngakumbi kune-DHT.
-Ukukhusela iCachexia yeCarceria
I-cachexia yaziwa ngokuqhelekileyo phakathi kwezigulane ezinobungozi be-cancer, ii-AIDS kunye nezifo zengqondo phakathi kwabanye. Ngokusebenzisa le androgen enamandla, uya kuba nako ukunqanda ukuvela kwayo. Oku kungenxa yokuba iPowder ye-LGD-4033 eluhlaza iyaziwa ngokwandisa ubunzima bemisipha kwaye ikhuthaza amandla omzimba. Ngaloo nto, inako ukunciphisa amathuba okuphuhlisa abantu abanjalo.
-Inyanisiweyo Umsebenzi wezesondo
Amanqanaba aphantsi ama-hormone e-testosterone emzimbeni ahlala ehambelana nokusebenza kwesini esingalunganga. Ngoku unokusombulula inani le-erectile dysfunctions njenge-ejaculation yangaphambili ngokuzama iLigandrol. Oku kungenxa yokuba iya kukhulisa imveliso ye-hormone ye testosterone emzimbeni, oya kuba nefuthe elihle kwimpilo yakho yesondo.
-Anganyanga umsebenzi we-Adrogenic KwiProstate
I-LGD-4033 Powder yandisa umsebenzi we -rogenic apho ufuna ukunyuka (imisipha) kwaye ayiyi kunyusa kakhulu apho ungafuni ukuba yonyuka (njenge-prostate).
Ishati elapha ngezantsi ibonisa umsebenzi we-androgenic kwi-prostate kunye nasesikhungweni sesisu. Olu pho nonongo luqhutywe yiViking Therapeutics, inkampani ethathe i-Ligandrol.
Isitshati enye nguTestosterone. Enye i-LGD 4033 (ngoku iyaziwa njengeVK-5211, iLigandrol).
Njengoko ubona, umsebenzi we-androgenic we-LGD 4033 uncinci kakhulu kwi-prostate kunezicubu ze-muscle, ngelixa i-Testosterone ifana ngokufanayo nganye.
I-LGD-4033 yomzimba womzimba iinzuzo
I-LGD-4033 Powder ithandwa phakathi kwezemidlalo kunye nabanye abaqeqeshi, kubandakanywa nabakhi bomzimba, abaphathi bamandla, abaqinileyo, imizekelo kunye nabafakiweyo. Lo mveliso unceda abasebenzisi ukuba bafumane ngokukhawuleza ubuninzi bemisipha yomzimba, banciphise amafutha omzimba, kunye nokunyusa ngokunyanisekileyo ukunyamezela kunye nemilinganiselo yamandla ngamnye. I-Ligandrol ye-LGD-4033 Ubuninzi obusibhakabhakeni abukwahlulelwanga ngokusemthethweni njenge-steroid, kodwa inqatshelwe njengesixhobo sokomeleza ukusebenza. I-Ligandrol inamandla kakhulu xa kuthelekiswa nokuxhaswa kwiklasi.
I-Mass Dean Muscle Mass
Ngaba unqwenela ukufezekisa umzimba osisigxina? Ngoku kulula kakhulu ukufumana ubunzima be-muscle engcono kunye ne-androgen ene-LGR-4033 enefuthe elikhusileyo le-CAS:1165910-22-4. Oku kungenxa yokuba i-LGD-4033 Powder iya kunceda umzimba wakho ufumane ukuveliswa kwamandla okwanda kunye nokujikeleza kwegazi okudlala indima enkulu ekwakheni imisipha.
-Unyusa iMiscle Strength
Ukuze i-LGD-4033 Powder eluhlaza ukukhusela nayiphi na indlela yokulahleka kwemisipha engakhokelela kwiimeko ze-osteoporosis, isebenza ngokuqinisa amathambo. Oku kunokwenzeka ngenxa yokwanda kwamandla omzimba. Oku kuthetha ukuba xa usebenzisa uLigandrol, kufuneka ulindele nawuphi na uhlobo lweemeko ezinxulumene nobuthakathaka obuthathaka.
-Izixhobo zeMandla elongezelelweyo
Enye yemisebenzi ephambili yesongezelelo kukunyusa amanqanaba e-testosterone emzimbeni. Oku kuthetha ukuba umzimba wakho uya kukwazi ukutshisa amaninzi amanqatha, aguqulwa amandla. Oku kungasetyenziswa emzimbeni ngeminye imisebenzi efana nayo; ukuphefumla kunye nokutya.
-Aids kwi-Weight Loss
I-Ligandrol / LGD-4033 / VK5211 ifunyenwe nendima enkulu ekuphuculeni inkqubo yakho yokulahleka kwesisindo. Oku kungenxa yokuba isebenza ngokuphucula amandla omzimba, oku kuthetha ukuba umzimba wakho uya kutshisa iikhalori ezininzi. Ngaloo ndlela, uya kugqiba ukulahlekelwa iikhalori ezininzi njengoko ziguqulwa zibe ngamandla.
I-LGD-4033 Ubuninzi obuninzi obuNcedo
Enye into eyenza i-LGD 4033 ibaluleke ngakumbi kukuba, ngokungafani ne-steroids ezininzi, nge-oral itholakale ngomlomo.
7. Ngaba i-LGD-4033 Powder Safe?
Uninzi lwababamkeli be-androgen kwiimarike baye badibana neempembelelo ezahlukeneyo. Esi sizathu sokuba bangasayi kunconywa. Nangona kunjalo, i-LGD 4033 iyi-receptor ekhethekileyo, esebenzayo, kwaye ikhuselekileyo kwaye ikhuselekile njengokuba kulindeleke. Ikhululekile kuzo zombini izithako kunye nezinto zeekhemikhali; ngenxa yoko awuyi kuba naluphi uhlobo lwefuthe elibi. Kuze kube ngoku, akukho nabasebenzisi abakuxelele nayiphi na imiphumo emibi, okwenza kube yimpumelelo ye-androgen enokuyithemba.
8. I-LGD-4033 Powder ngaphambi nangemva koko
Ngaphambi kokuba uqale ukuthatha i-ligandrol / i-LGD-4033 Powder malunga nemizila yakho yokwakha imisipha, kubalulekile ukuqonda into omele ulindele kuyo. Kukho iintlobo ezininzi eziza kufumana emva nje kokuthatha i-LGD-4033 Powder. Nangona ungeke uqaphele nayiphi na imiphumo emihle ye-LGD-4033 yePowder effects emva kweentsuku zokuqala, kufuneka uqale ukuziva utshintsho lwangempela emva kweentsuku ezintathu okanye kunjalo.
Ezi nzuzo ze-LGD-4033 ezikhusileyo zePowder (i-LGD-4033 Imveliso yePowder) zonyuka xa usebenza ngexesha usebenzisa le mveliso. Ukuthatha ikhefu kwisenzo sakho sokusebenzisa ixesha ngelixa usebenzisa le ncediso akuyi kuphazamisa iindlela ezi zinto zichaphazela ngayo.
Sibheke ngeenxa zonke kwi-interenet, njenge-LGD-4033 ebomvu yokukhishwa kwePowder reddit, nantsi enye umfanekiso malunga ne-LGD-4033 Powder ngaphambi nangemva.
9. Ukusebenzisa I-LGD-4033 Powder LGD-4033 Ukunyuka kwePowder
Isilinganiso somlinganiselo we-LGD-4033 umda we-5-10mg ngosuku. Umjikelezo we-LGD-4033 obuninzi Ubunzima bokugcina i-6-12weeks. Isilinganisi se-LGD-4033 Powder singanyuswa kwisithathu se-LGD-4033 b Umjikelezo wePowder ngokuxhomekeka kwithuba elide ulidle ngalo. Ngalolu hlobo lwe-LGD-4033 olukhusileyo lwe-Powder dosing, uya kuthi ufumane iiplani ze-5-10 zesisindo esisinyama ngasinye ngenyanga. Njalo ubuze umcebisi wakho wezempilo ngaphambi kokusebenzisa nayiphi na isongezelelo sokuphunyezwa ngokukhuselekileyo emzimbeni.
Ukuba unokwakha olukhulu kunokuba ungadinga ukuthatha i-LGD-4033 ephezulu ye-Powder dosage ngoba ingenakukunika iziphumo ze-LGD-4033 Powder ozifunayo. I-LGD-4033 enefuthe lePowder dose oyithathayo, i-LGD-4033 eneempembelelo ezichaphazelekayo kwaye unobalulekile ukukhumbula ukuba i-LGD-033 inezinga eliphantsi kakhulu lemiphumo ngenxa yoko le nto Ndifuna ngokwenene ukuxhalaba malunga nexesha elide. Ukuba uthatha i-LGD-4033 Powder eluhlaza ngexesha elide xesha awuyi kufuna ukuthatha ixesha elide kuneeyure ze-12 ngexesha. Oku kuyaziwa ngokuba ngu-LGD-4033 Powder cycle. Ewe, xa ugqiba i-LGD-4033 Powder dose okanye umgca wakho we-LGD-4033 obuninzi bePowder, ungalahlekelwa bunzima kuba njengoko kuchazwe ngentla, umzimba wakho uya kuwisa ezinye ze-glycogen. Le nto akuyiyo ukuba uxhalabele malunga nokuba ngaba uya kufumana imiphumo efanayo ye-LGD-4033. Xa uqala kwakhona umjikelo wakho we-LGD-4033 Powder kwakhona, umzimba wakho uya kuqokelela kwakhona ukuze uqaphele oku ukuba ufuna ukuqonda into eyenzekayo emzimbeni wakho.
Kukho konke, abantu bathabatha iPowder ye-LGD-4033 ebomvu ngenxa yokuba bafuna ukwanda kunye nokuba bafuna ukunciphisa umzimba. Kukhuselekile ukusetyenziswa kwaye uya kumangaliswa ukuba zinokukunceda njani. Ewe, kukho ezinye izinto oza kufuneka uziqwalasele xa ukhetha umkhiqizo wakho. Ngokomzekelo, ezinye i-steroids zinokukunika imiphumo emibi kwaye oku kubaluleke kakhulu ukuba ungumfazi. Oku kungenxa yokuba inokunika iziganeko zomntu kwaye konke lokhu ngenxa ye-testosterone oyifumana ne-steroid ngokwayo. Xa uthatha i-LGD-4033 Powder eluhlaza kodwa akudingeki ukhathazeke ngale nto kuba unokufumana amandla kunye nokunyamezela kwe-LGD-4033 i-Powder benefits ngaphandle kokuba ube ne testosterone eyongeziweyo.
10. I-LGD-4033 I-Effects Side Effects
I-LGD-4033 / i-Ligandrol iphakathi kwezinto ezingezizo zinobutyhefu kwaye ngoko iqulethe kakhulu imiphumo ye-LGD-4033 yePowder effects. Enyanisweni, i-LGD-4033 / ligandrol yindlela ekhethiweyo ye-steroids kubantu abafuna ukulahla amafutha kunye nenqwaba ephezulu ukusuka kwi-steroids enzima kakhulu nemiphumo emibi. Ukutya kwayo akuyiyo nayiphi na impembelelo kwisibindi kodwa kucebise ukuba ufumane i-PCT epheleleyo kuba i-LGD-4033 Ubuncwane obuncitshisiweyo bukhupha phezulu nakwezinye ii-SARM ezaziwa.
Ukusetyenziswa kwe-LGD-4033 / i-Ligandrol nantoni na eminye imiqobo ngaphandle kokungaxakekanga kodwa ngaphambi kokuthenga abasebenzisi kufuneka baqaphele. Ezi zinto ziquka:
-Ukunyuswa kwamanqanaba e-Testosterone yamahhala
Ezinye iziphumo zempembelelo ze-ligandrol / i-LGD-4033 Impembelelo yentsholongwane yabonisa ukuba ukusetyenziswa kwayo kunokubangela ukunciphisa kakubi amanqanaba e-testosterone yamahhala. Oko oku kuthetha ukuba ukunciphisa ukusebenza kwempumelelo. Kodwa le ngxaki eyayiza kubonakala emva kweeveki zokusebenzisa ligandrol. Kukho akukho nto ibonisa ukunyanzelwa kokusisigxina emva kokusebenzisa ligandrol.
-Gunyaza iNqanaba leGlubulin
I-LGD-4033 / ligandrol ngamanye amaxesha anamaqondo aphantsi e-globulin. Oku ngokuqhelekileyo i-hormone yesondo eyanceda ekukhonkeleni amanye amahomoni. Xa amazinga ayo ehla, ukuba nemiphumo emibi yezocansi sinokwenzeka. Oku akunjalo umphumo osisigxina njengoko uyanyamalala emva kweveki ezimbalwa zokusebenzisa ligandrol.
I-Ligandrol okanye i-LGD-4033 Ukuhlolwa kwePowder kuyinto eyongeziweyo yempilo xa isondela kumzimba wezakhiwo. Eyaziwayo njengenkampani ye-SARM, le ncediso yezempilo iyaziwa ukuba ibonise inzuzo yezempilo yangempela. I-LGD 4033 okanye i-Ligandrol yenziwe yiLigand Pharmaceuticals, apho ifumana khona igama layo. Se tyenziswa njenge iziyobisi zomzimba, kunceda ukufumana ubunzima bomzimba ngokukhawuleza.
Ukugqithiswa kweziphumo eziphambili, kuboniswa ukuba kuneziphumo ezithembisayo ekufumaneni ubunzima besisundu kunye nokuqhawula ngokukhawuleza ngexesha elifutshane. Ukuze abantu bahlale beqaphela impilo, le SARM inceda ukufezekisa amandla ngokupheleleyo xa kwakhiwa umzimba oqaqambileyo ekugqibeleni.
Kuzo zonke ivenkile ze-intanethi esizihlolisisile, into enokuyifumana yenzeke lula i-AASraw (www.aasraw.com). Inkampani ye-AASraw ibonisa umgangatho ophezulu we-ligandrol powder / LGD-4033 Powder kwimarike, kunye nezinye iindidi ezininzi zepowder eluhlaza. Kananjalo inezinye iintlobo zezinye iintlobo esizibonangayo xa kulungiswa kwiintlobo ezahlukeneyo zevenkile ze-intanethi. Ngokomzekelo, kwelinye ilizwe, baya kuthumela i-LGD-4033 yakho Powder eluhlaza kwimiba yeentsuku, kunokuba iiveki ezimbalwa. Ngenxa yoko, unako ukufumana iPowD-4033 Powder (LGD-4033 Powder Powder) okanye ezinye iintlobo ze powder eluhlaza xa ufuna.
I-AASraw ine-certification eyayisanda kutshanje njengale nyaka. Ezinye iinkampani zinezatifikethi ezineminyaka emininzi emdala kwaye kwezinye iimeko, ayisekho kwinkampani.
Ezi zatifikethi zenzelwe ukubonisa ukuba inkampani ithathe amanyathelo angaphezulu ukuqinisekisa ukukhwela kwemveliso yazo. Ngoko sifumana ukuba inkampani ye-AASraw ibume ngaphezu kweminye inkampani ezithengisa i-LGD-4033 Inkcazo engcolileyo kwi-Intanethi.
Kukho iindawo ezininzi ongayithenga ngayo i-LGD-4033 Powder. Kodwa kukho imithombo emininzi ye-intanethi apho ungaya khona ukuthenga le nto. Sincoma ukuthenga i-LGD-4033 Powder kunye nezinye i-steroids ezixutywe kwi-online online, ngenxa yokuba unokuqinisekisa ukuba uyifumana ngokukhawuleza kunye nexabiso elisezantsi.
I-LGD-4033 (VK5211) i-Ligandrol powder Kutheni sithenga i-LGD-4033 / VK5211 / Ligandrol powder kwi-AASraw? Iinzuzo zokusebenzisa i-MK-677 (Ibutamoren) ipowder yokwakha umzimba Ngaba ngokwenene i-Modafinil ekuphuculeni i-brainpowder isebenza kakuhle Emva kokuthatha?
tags: bathenge i-LGD-4033 powder, bathenge i-Ligandrol powder, I-LGD-4033 powder, Abaxhasi be-LGD-4033, Ligandrol powder
Kutheni sithenga i-LGD-4033 / VK5211 / Ligandrol powder kwi-AASraw?
Thenga umgangatho ophezulu we Sarms GW 501516 (Cardarine) powder online	Thenga i-S4 (i-Andarine) I-Powder Online | Yonke into ofuna ukuyifumana